Aragtidayda Koowaad - Geofumadas
My aragti ugu horeysay
Leica Airborne CityMapper - xalka xiisaha leh ee khariidaynta magaalada
Waxay u egtahay inaynaan waligeen arki doonin SmartCity dhab ah, oo leh himiladeeda ku habboon. Waxay u badan tahay inay jiraan baahiyo aasaasi ah oo ku saabsan duruufahayada marka loo eego fikirka internetka ee Waxyaabaha. Oo ay ku jiraan, in waxa xalalka ay soo saarayaashu sameynayaan cidina aysan weydiinin. Runtu waxay tahay in loolanka loogu jiro inuu isku muujiyo ...
Ka dib iibsiga Trimble ee Ashtech, Spectra waxay bilowday inay dhiirrigeliso alaabada Maabka Moobaylka. Kuwa ugu fudud ayaa ah Mashiinka Moobaylka 10, kaas oo aan doonayo inaan jaleeco waqtigan. Noocyada Mashiinka Moobaylka Pro, CE iyo CX ayaa halkaas ku dhammaaday in kasta oo uu weli suuqa ku jiro ...
cadastre, Featured, GPS / Qalabka, tabo cusub, aragti ugu horeysay
Khariidadda Bentley PowerView V8i, Aragtida Koowaad
Waxaan helay nooc ka mid ah PowerView V8i Select Taxanaha 2 (Nooca 8.11.07), khadka ugu jaban ee aagga khariidaynta ee Bentley rajeynayo in laga faa'iideysto. Markii hore, shakigeyga qaar ayaa laga tirtiray qoraalkii hore markii aan tusay saddexda sadar ee aagga geospatial-ka ee 2011. Marka hore, halkii aan ka noqon lahaa mid ...
Ashtech waxay dhawaan soo bandhigtay qaabkeeda cusub ee qalabka, taas oo lagu muujiyay shirkii caalamiga ahaa ee ESRI dhawaan, oo loo yaqaan 'Mobile Mapper 100', oo ah horumar leh astaamaha Mobile Mapper 6 laakiin ka saxsan kan ProMark3. Asal ahaan, kani waa kooxda aan aaminsanahay inay Magellan hayn doonto ...
Marka la gaaro Juunyo 2010, waxaa laga faallooday in ArcGIS 10 la heli doono, taas oo aan u aragno inay noqon doonto guul muhiim ah oo la aqoonsan doono heerka ESRI ee meelaynta aagga geospatial. Horeba fagaaraha iyo meelaha kaleba waxaa ka jira hadal badan, waana hubaal inta udhaxeysa hadda iyo Shirka Isticmaalayaasha Julaay, waxaan awoodi doonaa inaan waxbadan ogaano. Si loo simo…
TopoCAD waa xalka aasaasiga ah ee wali dhameystiran ee sahaminta, sawir qaadista CAD, iyo qaabeynta injineernimada; in kasta oo uu intaas ka badan ku sameeyo isbeddel ku dhacay in ka badan 15 sano dhalashadiisii ​​Iswidhan ka dib. Hadda wuxuu ku faafay adduunka, 12 luqadood iyo 70 dal, in kasta oo aysan u muuqan inay gaareen ...
Waxaan kugula talinayaa inaad waqti qaadato si aad u ogaatid bartaas, oo hadda gaareysa sanad hawlgal ah. Waxaan ula jeedaa ConstrucGeek, lixda daqiiqo ee aad filaysay inaad ku bixin jirtay aqrinta geofumed cusub waa in lagu maal galiyaa balooggan. Waxaa jira laba fursadood oo keliya: inaad ogaato in mawduuca CAD ee laxiriira injineernimada uusan ahayn ...